Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် non ionic ပျော့ပြောင်း ထုတ်လုပ်သူနှင့် non ionic ပျော့ပြောင်း ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း, ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပို့ကုန်အတွက်အသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံလူကြိုက်များ Taiwan။ အင်အားကြီးဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်နှင့်လိမ္မာအလုပ်ရှင်များမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ non ionic ပျော့ပြောင်း ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်ရှိသည်။ အခမဲ့ခံစားရ ကျေးဇူးပြု. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - CL-909
ရေချိုးဆေးဆိုးများအတွက် Hygroscopic ပျော့ပြောင်း
ဤအေးဂျင့် CL-909 ရေတစ်ခုဖြစ်သည်-စုပ်ယူမဟုတ်သော-ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှဂရုတစိုက်တီထွင်ထုတ်လုပ်သည်.အဓိကအားဖြင့်ပျော့ပျောင်းအေးဂျင့်ကုသမှုမြှင့်တင်ရန်,fluffy နှင့်ပျော့ပျောင်းထိတွေ့နှင့်အတူဖိုင်ဘာဖုံးအုပ်ရန်အပြင်,၎င်း၏အကြီးမားဆုံးလက္ခဏာမှာဝါဂွမ်းထည်နှင့်ရောနှောထားသောထည်၏ရေစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/non-ionic-softener.html
non ionic ပျော့ပြောင်း ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ non ionic ပျော့ပြောင်း ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ non ionic ပျော့ပြောင်း ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan